Apple Music inoshanda Android Auto | Ndinobva mac
Mazuva mashoma mushure mekuuya kwe Apple Music yevanoshandisa Android Auto, iri basa rakavhurwa zviri pamutemo nekuda kwekutanga kweiyo nyowani vhezheni 2.6 yeApple Music yeApple.
Ichokwadi ndechekuti iyo nyowani vhezheni inowedzera mashoma shanduko maererano neyakajairika mashandiro eApple app, kunze kwekuti hongu, chakanyanya kukosha mukana wekushandisa Apple mumhanzi mutambi mumota yako neAuto Auto. Iyi sevhisi nyowani inowanikwa kune Apple Music vashandisi inogona kushandira kupa imwe Push maererano nekushandisa zvekushandisa.
Iyo itsva vhezheni yeApple iri pano inowanikwa paGoogle Play, zvakare zvachose yemahara. Nenzira iyi, chero munhu anogona kushandisa sevhisi yemumhanzi mumota pasina kubata nhare mbozha, chimwe chinhu yakakosha kwazvo patinotyaira. Zvakare nekuwana iko kunyorera tichaona chikamu cheMumhanzi, isu tinowana ese masevhisi anowanikwa kubva kuapp uye chidzitiro chemota yedu.
Kune rimwe divi, rondedzero ye "Shamwari" inowedzerwa mukati mekushandisa pachayo kuitira kuti iwe ugone kugovana mimhanzi kubva pane runyorwa neboka reshamwari zviri nyore uye nekukurumidza. Kuuya kweApple Music paApple kwakakonzera mhirizhonga panguva yekuvhurwa kwayo, asi zvishoma nezvishoma uye nekufamba kwenguva vamwe vashandisi vanoramba vachijoinha ino sevhisi yemimhanzi sevhisi kubva kuApple. Rangarira kuti parizvino Apple inoramba ichipa yakasununguka yemwedzi mitatu basa rekuyedza yevashandisi vatsva veApple Music, saka ikozvino inogona kunge iri nguva yakanaka yekuyedza iyo app.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Apple Music ikozvino inoshanda paAuto Auto
Pixelmator Pro ichiri kuwanikwa pahafu yemutengo